Kooxaha Microsoft ee macOS waxay dhawaan ku dari doonaan taageerada duubista otomatiga ah | Waxaan ka socdaa mac
Kooxaha Microsoft ee macOS waxay dhawaan ku dari doonaan taageerada duubista otomatiga ah
Maalmo ka hor ayaanu kugu wargelinay warka ay Microsoft Teams hirgelin doonto dhamaadka bisha Ogosto. Da'da aan ku jirno iyo halka kulamada khadka tooska ah ay si gaar ah muhiim ugu noqdeen cudurka faafa awgeed, layaab malahan in codsiyada kulan dalwaddeed ay dhigayaan baytariyada. Microsoft waxay leedahay Kooxo waxayna go aansatay in barnaamijkani noqdo mid kufiican dhamaan barnaamijyada macOS-na waa mid kamid ah. Shaqeynta ah duubis otomaatig ah.
Cudurka faafa ee ay abuurtay COVID wuxuu abuuray qaab cusub oo si joogto ah loola xiriiro. Hal dariiqo oo aad uga shaqeyn karto meel fog maadaama mid ka mid ah siyaabaha looga fogaado is-qaadsiinta ay tahay masaafada bulshada. Kulamada khadka tooska ah waa saldhig waana sii socon doonaa maxaa yeelay wax soo saarku hoos uma dhacayo. Tani waa waxa uu yiri Tim Cook dhawaan iyo sidoo kale kuwa mas'uulka ka ah Microsoft, taasi waa sababta ay u xoojiyaan Kooxaha Mac.
Iyada oo Forum laga bilaabo Microsoft Teams, waxaa loo xaqiijiyay hal isticmaale in Microsoft waxaad ka shaqeyneysaa duubista kulanka otomaatiga ah. Habkaani wuxuu sidoo kale u mari lahaa habka Mac ee Kooxaha Microsoft.
Cusboonaysiinta soo socota, Waxay u muuqataa in abuuraha software-ka uu u oggolaan doono dadka isticmaala inay Microsoft Teams si otomaatig ah u bilaabaan duubis markii kulanku bilowdo. Waxay umuuqataa fikrad aad ufiican machadyada tacliinta halkaasoo ay fiicantahay in shirar si toos ah loo duubo. Haddii aad horey u sii ogeyd in kulan loo baahan yahay in la duubo markaa way fiicnaan laheyd inaad heysato ikhtiyaar markii jadwalka kulanka loo qabanayo si toos ah duubista. Tani waxay kaa caawin kartaa inaadan iloobin inaad bilowdo duubista oo aad wakhti iyo dadaalba keydiso adigoon xasuusanin inaad gacanta ku sameyso.
Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah su'aasha ku saabsan duubitaanadan otomaatiga ah waxaa la qabtay 2018. Hadda ku dhowaad saddex sano ka dib, waxaan haynaa jawaabta shirkadda. Waxaan dhihi karnaa waxa aan ka dooneyno fagaarayaashaan taageerada ah, laakiin waxaa iska cad in ugu dambeyn ay ka jawaabaan.
Taariikhda saxda ah lama oga, laakiin waxaa la sheegay in shaqeynta dhowaan la hirgelin doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Kooxaha Microsoft ee macOS waxay dhawaan ku dari doonaan taageerada duubista otomatiga ah
macOS Big Sur 11.3.1 hadda waa la heli karaa waxayna hagaajineysaa cillad xagga amniga ah
Miyaad ku dhiiran lahayd inaad god ka sameyso AirTags-kaaga si aad ugu xirtid laalaadda? iFixit, haa